Dowladda oo ka fiirsaneyso dib u furka fasallada kale ee dugsiyada dalka – Radio Damal
Dowladda oo ka fiirsaneyso dib u furka fasallada kale ee dugsiyada dalka
Xoghayaha waaxda tacliinta sare iyo cilmi baarista Simon Nabukwesi ayaa waxa u ardaydi dhawaan dib ugu laabtay iskuulada ee fasalladda afaraad iyo sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa dhigta fasalka afaraad ee dugsiyada sare ku dhiirrigeliyay inay sii wataan waxbarashadooda iyagoona walaac ka qabin cudurka sii faafaya ee COVID-19.
Mr. Nabukwesi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda ay ka fiirsaneyso fursadaha dib loogu furi karo in ardayda kale ay dib ugu laabtan goobaha waxbarashada.
Waxaa uu ardayda uu sheegay in cudurkan uusan weli dalka ka dhammaan balse waxbarashada ay sii socon doonta islamarkaana carruurta ay guriyaha kaga ammaan fiican yihiin dugsiyada
Hadalkan ayuu jeediyay xilli uu booqasho ku tagay dugsiga sare ee ismaamulka Bungoma iyo dugsiga hoose dhexe ee Bukunjangabo.
Waxaa uu macallimiinta uga mahadceliyay sida ay uga go’an tahay wax baridda ardayda isagoona ku dhiirigeliyay inaysan u diyaarin ardayda imtixaanaadka shahaaddiga taas oo la qorsheeyay in la sameeyo bisha Maarso ee sanadka soo socda.
Waxaa uu ugu baaqay inay diiradda saaraan sidii ardayda ay u heli lahayeen casharrada maadooyinka kala duwan.
Xoghayaha ayaa intaa ku daray in ka wasaarad ahaan ay ka walaacsan yihiini badqabka ardayda iskuulada jooga waana sababta aan u hubineyno in dugsiyada ay haysatan kuraas iyo miisas ku filan si ardayda ay u kala fogaadaan oo aysan isu gudbin cudurka ayuu yiri.
Dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Prof. George Magoha ayaa maanta sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn taariikhda dib loo furaya fasalladda kale ee dugsiyada ee xiran tan iyo bartamihii bishii saddexaad ee sannadkan.
Magoha ayaa carrabka ku adkeeyay in dugsiyada dalka ay si buuxda u hirgeliyeen tallaabooyinka lagu xakameynaya faafidda cudurka COVID19.
Waxaa uu xusay inuu jiro hal dugsi oo aan weli tallaabooyinkan dhaqangelin in kastoo uusan magaciisu shaacin.
Wasiirka ayaa maamulka xaruntan waxbarasho u qabtay ilaa berri si uu u soo buuxiyo waxyaabaha laga doonaya hadii kale magaca dugsigaas shaaca laga qaadi doono.
Sidoo kale waxaa uu xusay in waxbarashada ardayda dugsiyada ku laabtay 12-kii bishii hore ay si habsami leh u socoto.
Dhanka kale Wasiirka ayaa meesha ka saaray in goobaha waxbrashada dib loo xiri doono gaar ahaan ardaydii dhawaan dib ugu laabtay iskuulada kaddib markii ay kordheen kiisaska cudurka Covid-19 ee gudaha dalka.
Hadalkan ayuu jeediyay xilli booqasho ku tagay dugsiga hoose dhexe Mukuru ee magaaladatan isaga oo qiimeynayay habka waxbarashada ay usocota ee dugsigaasi iyo sidoo kale bixinta miisaska iyo kuraas ku filan ardayda iskuulkaasi,
Magoha ayaa sheegay in carruurta ay ku nabad qabaan iskuulada islamaarkaana waalidiinta ay sidaa doonayaan.
Waxaa intaa ku daray inay wali socdaan wadatashiyo surtagal ah in ardayda kale dib loogu furo goobaha waxbarashada iyadoo madaxweynaha dalka Mr Uhuru Kenyatta lagu wado inuu maalinka Arbacada ee 4-ta bishaan uu kala hadlo guddoomiyeyaasha ismaamulada iyo saamileyda waxbarashada arrinkan kaddibna go’aan laga soo saari doona .
Magoha ayaa dhanka kale sheegay in wasaaradda waxbarashada ay si dhow ula shaqeyneyso dhigeeda arrimaha gudaha si ay ula socoto xaaladda.
Dowladda dhexe ayaa lacag dhan 1.9 bilyan oo shilin u qoondeysay sidii dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare loogu qaybin lahaa kuraas lagu sameeyay gudaha dalka.